5 zvinhu iwe zvausingazive nezve yako yekuchengetedza kamera | Gadget nhau
Gadget nhau | 26/04/2021 10:53 | Gadgets
Kuchengetedzwa kwemusha wako, bhizinesi kana hofisi kwakakosha. Kune izvi, kune maaramu masisitimu ayo anofambidzana neanoongorora makamera ayo bvumira kuchengetedza nzvimbo dzakasiyana dzakachengetedzwa uye kuona munguva inokodzera kupinda kwevanopinda munguva chaiyo. Zvisinei, ivo zvechokwadi vachiripo zvinhu zvausingazive nezveako kamera yekuchengetedza uye izvo zvakavashandura kuita chishandiso chakasiyana.
1 Makamera kuitira kubatsira kwekuchengeteka
2 Zvinhu zvawaisaziva nezve yako yekuchengetedza kamera
3 Bhenefiti yekushandisa yekuongorora kamera
Makamera kuitira kubatsira kwekuchengeteka
Makamera ekuchengetedza anoshanda senge yakavharwa redunhu vhidhiyo iyo yakabatana kune yekutarisa system, iyo inongoonekwa chete nevanhu vane mukana wekuwana. Basa rayo nderekutora zviitiko munguva chaiyo, tora mapikicha kubva kumakona akasiyana uye nhepfenyuro rarama zvinoitika kunyangwe mukati mehuwandu hwe360 °kuitira kuti muridzi ave nezvinhu zvakakosha zvekutsigira kana paiba.
Vazhinji vashandisi parizvino vane makamera ekutarisa akabatana nemaalarm avo, pamusoro pekushandisa epakati masevhisi seaya anopiwa ne Movistar Prosegur maAlarm, sezvo ivo vaona kuti ivo vari a chidimbu chakakosha kuchengetedza imba yako kana bhizinesi kuchengetedzwa nguva dzese.
Kune rimwe divi, makambani akaita seProsegur anokupa iwe akasiyana siyana masevhisi mairi iwe unogona kusarudza yekuongorora kamera modhi inokodzera zvaunodaKunyangwe iwe uchida kufamba kwekufamba mumakamuri makuru kana makamuri madiki.
Zvinhu zvawaisaziva nezve yako yekuchengetedza kamera
Kunyangwe paine chokwadi chekuti makamera ekuchengetedza ave akakurumbira nhasi uye anoshandiswa mukuchinjana mumhando dzakasiyana dzezvivakwa, Kune zvinoda kuziva nezvavo zvaungasaziva, senge zvataurwa pazasi:
Panguva yegore Ma1960 ekuchengetedza makamera akashandiswa kuongorora rocket kuvhurwa kuGerman. Masisitimu ayo akagadzirwa naWalter Bruch, kuitira kuti vatevere chiitiko ichi pasina kuisa hupenyu hwevashandi vayo panjodzi.
Kuburikidza nedzidzo dzakaitwa mu2014 zvakatemwa kuti pakanga paine angangoita makumi maviri nemakumi maviri nemashanu emamiriyoni ekuchengetedza makamera pasirese, achinyatso shanda, chimiro icho, pasina mubvunzo, chakawedzera nhasi nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji uye nyore kuwana iyo Internet.
Waizviziva here kuti pese paunoshandisa ATM unoongororwa kuburikidza nekhamera? Muchokwadi, kune dzakawanda zviitiko zvekubiridzira zvakagadziriswa nekuda kwedzidziso yakanyorwa pane izvi zvigadzirwa.
Pane nzvimbo uko makamera ekutarisa anogara achiiswa ayo anoramba achinyora maawa makumi maviri nemana pazuva, sezvazvakaita nezvitoro, zvitoro, mabhanga, migwagwa yeruzhinji nemigwagwa mikuru iri mudhorobha.
Mamwe makamera ekuchengetedza anoshanda pasina magetsi, yeizvi ivo vanopihwa bhatiri rinovatendera kuti varambe vachinyora mukati meimwe nguva muganho.
Parizvino, vanhu vazhinji vane nhare mbozha inovabvumidza kubatana neInternet, neizvi vanogona kuwana mifananidzo inopihwa nekamera yavo yekutarisa kuburikidza nechishandiso chakapihwa neavo alarm alarm uye tarisa munguva chaiyo zvinoitika mukati meimba yako, kubva chero kupi pasi.
Bhenefiti yekushandisa yekuongorora kamera
Makamera ekucherechedza ndiwo maziso ekuchengetedza kwako system, vane simba rekuona mafambiro kuburikidza nema sensors akawanikwa munzvimbo uye shandisa alarm munguva yakakodzera iyo yakanyoreswa mukati memazana epakati saMovistar Prosegur, uyo achazivisa zviremera zvinoenderana munguva pfupi.
Zvekuti uchengete imba yako kana bhizinesi rakachengeteka, unogona kusarudza yakanakisa yekutarisa system uye uve nechokwadi chekuti ine makamera anoshanda uye ine yakakwana yekuvhara margin. Iwe unofanirwa zvakare kufunga nezvezvaunoda chaizvo, nekuti zvichibva pairi iwe unozotungamira sarudzo yeako akakosha ekuchengetedza kamera.
Semuenzaniso, iwe unowana vamwe vane hwakawanda hwakawanda senge thermals, asi mhando yevhidhiyo haina kunyatsonaka; apo izvo zvakajairika zvine mashoma kufukidzwa zvinokutendera iwe kuti utarise hunhu hwemunhu anopinda mune zvakadzama ruzivo. Kune rimwe divi, kana uchishandisa PTZ yako yekutarisisa renji inowedzerwa sezvo iine kufamba, izvo zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti utore nzvimbo dzakananga.
Zvakare, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti Hazvina kufanana kufukidza kuchengetedzwa kwecafurati, chalet kana hofisi pane indasitiri, mune iyo mamiriro ezvinhu iwe uchazofanira kusarudza huwandu hwemakamera ayo anodikanwa kuti uve nechokwadi chehuwandu hwekuvhara.
Kazhinji, vhidhiyo yekuongorora kamera masisitimu anowanikwa mukati meakiti kamu seaya anobva kuMovistar Prosegur Alarmas, ayo anosanganisira zvese zvakakosha zvekuisirwa ino sisitimu yekuchengetedza uye inopa kubatana kwekusingaperi neako wepakati wekugamuchira chiteshi. , kutarisa pamusoro peimba yako kana bhizinesi maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » 5 zvinhu iwe zvausingazive nezve yako yekuchengetedza kamera